Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 07:06
2 063 octets supprimés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 06:39 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 07:06 (hanova) (esory)
== Ny andro ao amin'ny herinandro ==
Manomboka amin'ny filentehan'ny [[masoandro]] ny andro malagasy ary manomboka amin'ny andro [[Alakamisy]] ny [[herinandro]]. Ny iray volana ao amin'ny [[tetiandro malagasy]] dia misy 29 na 30 andro.
=== Alakamisy ===
Andro voalohany ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy ny andro [[Alakamisy]]<ref name=":1" />. Ny teny hoe ''Alakamisy'' na ''Lakamisy'' na ''Kamisy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الخميس / ''al-khamīs'' izay midika hoe "andro fahadimy".
=== Zoma ===
Andro faharoa ny andro [[Zoma]]. Ny teny hoe ''Zoma'' na ''Azoma'' na ''Joma'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الجمعة / ''al-jum‘ah'' izay midika hoe "andro fahenina". Amin'ny ankapobeny dia ndro mainty ny Zoma, araka ny finoan'ny Ntaolo malagasy, ka natokana handevenana.
=== Asabotsy ===
Andro fahatelo ny andro [[Asabotsy]]. Ny teny hoe ''Asabotsy'' na ''Sabotsy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe السبت / ''as-sabt'' izay avy amin'ny teny hebreo hoe שָׁבַת / ''shabbat'' na avy amin'ny teny hebreo hoe ''shabbos'' izay samy manondro ny andro Asabotsy sady midika hoe "andro fitsaharana" na "andro fialan-tsasatra". Amin'ny ankapobeny dia andro "mibontsina" ny Asabotsy, araka ny fivoasana sy ny finoan-drazana malagasy, ka natokana hitomaniana sy hamoizana ny maty.
=== Alahady ===
Andro fahefatra ny [[Alahady]]. Ny teny hoe ''Alahady na Lahady'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الأحد / ''al-aḥad'' izay midika hoe "andro voalohany". Amin'ny ankapobeny dia andro mahery ny Alahady, raka ny finoan'ny [[Ntaolo]] malagasy, ka tsy azo andevenana ny marainany.
=== Alatsinainy ===
Andro fahadimy ny [[Alatsinainy]]. Ny teny hoe ''Alatsinainy'' na ''Latsinainy'' na ''Tinainy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الإثنين / ''al-ithnayn'' izay mitovy dika aminy. Amin'ny ankapobeny dia andro mafy sy mainty ny Alatsinainy, araka ny finoan-drazana malagasy. Tsy fisantaran-javatra io andro io fa andro fandevenana. Amin'ny maha andro mafy azy dia andro fanamafisan-javatra sy fandevenana ny Alatsinainy.
=== Talata ===
Andro fahenina ny [[Talata]]. Ny teny malagasy hoe ''Talata'' na ''Atalata'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الثلاثاء / ''ath-thulathā’.'' Aminny ankapobeny, amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia tsy mety ny mamangy mana-manjo amin'ny andro Talata, araka ny finoan'ny Ntaolo malagasy. Andro tsara hivoahan'ny [[andriana]] na ny tafika ny andro Talata. Ataon'ny Ntaolo malagasy hoe " Talata gorobaka" ny andro Talata.
=== Alarobia ===
Andro fahafito ny andro [[Alarobia]]. Ny teny malagasy hoe ''Alarobia'' na ''Larobia'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الأربعاء / ''al-’arbi‘ā’'' izay midika hoe "andro fahefatra". Amin'ny ankapobeny, amin'ny Ntaolo malagasy dia andro ratsy ny Alarobia, araka ny fitenenana hoe "Alarobia tsy miverina". Natokana ho an'ny famoizana sy ny fandevenana ny Alarobia.
== Ny orim-bintana roa ambin'ny folo ==
==== Ny tonon'andro sy ny fitetezanana andro ====
Mitondra tonon'andro telo izay antsoina hoe "vava" (na "vavany") sy "vonto" ("vontony") ary "vody" (na "vodiny") ny renivintana, fa tsy mitondra afa-tsy tonon'andro roa atao hoe "vavany" sy "vodiny" ny zanabintana. Ao anatin'ny iray volana dia mifanarakaraka araka ny filaharany ny vintana ka ny vavan'ny vintana mitovy anarana amin'ny [[Volana (fotoana)|volana]] diavina no anombohana (ohatra, vava Alahamady); andro ahatsinanan'ny [[Volana]] izany. Tsy isaina ho andro voalohany ao amin'ny volana ny tonon'andro iray raha tsy tsinana alohan'ny mitataovovonan'io andro io ny Volana. Ny ao anatin'ny iray volana malagasy anefa mety misy 28 hatramin'ny 30 andro. Raha misy 28 andro ny iray volana dia mifarana amin'ny vodin'ny vintana mitovy anarana amin'ny volana eo aloha ny volana diavina (ohatra, vody Alohotsy, raha ny volana Alahamady no diavina). Raha tsy tsinana ny Volana alohan'ny mitataovovonan'min'ny faha-29 andro dia lasa misy 29 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vavan'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io (ohatra, vava Alahamady, raha ny Alahamady no volana diavina). Fa raha mbola tsy tsinana ihany ny Volana amin'ny faha-30 andro dia misy 30 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vodiny na ny vonton'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io, ka vodiny raha zanabintana fa vontony raha renivintana.
==== Ny toetra ankapoben'ny tonon'andro ====
Misy "tsara" sy "ratsy" ny vintana na ny tono'nandro. Arakaraka ny zavatra kasaina hatao no mety hahatsara na haharatsy ny tonon'andro iray, na dia mety ho tsara na ratsy amin'ny ankapobeny aza. Ohatra, ny vintana Alakaosy dia vintana malaza ho ratsy, nefa andro tsara anandratana ody ny tsinam-bolan'ny volana Alakaosy (vava Alakaosy) izay atao hoe Alakaosibe. Na dia vintana ratsy amin'ny anjkappobeny aza ny Alahasaty dia heverina fa tobniob'andro tsara ny vody Alahasaty satria ny zaza teraka amin'io dia ho tratra antitra ary tonon'andro tsara ho fisantaran-javatra sy fampakaram-bady koa ny amin'io.
Misy koa ny tonon'andro na vintana mahery na maivana. Ny [[renivintana]] rehetra dia inoana fa vintana mahery. Misy koa anefa zabintana inoana fa mahery. Malaza ho vintana mahery indrindra ny Alahamady (renivintana) sy ny Alakaosy (nefa [[zanabintana]]). Vintana mahery ihany koa ny Adizaoza (zanabintana) sy ny Asorotany (renivintana) sy ny Adimizana (renivintana) ary ny Adijady (renivintana). Ny Alohotsy dia inoana ho vintana maivana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974877"